अन्ततः राष्ट्रपति भण्डारीद्धारा संसद विघटन – PathivaraOnline
Home > समाचार > अन्ततः राष्ट्रपति भण्डारीद्धारा संसद विघटन
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेकी छन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले आइतबार दिउँसो संसद विघटन गरेकी हुन्। राष्ट्रपतिको कार्यालय शितल निवासले विज्ञप्ति जारी गर्दै संसद विघटन गरेको जानकारी दिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संसद विघटनसम्बन्धी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसबारे आन्तरिक छलफलमा जुटेकी थिईन। प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार राष्ट्रपतिसमक्ष विघटनसम्बन्धी सिफारिस बुझाएर फर्किएपछि आन्तरिक छलफलमा जुटेपछि यो निर्णय गरेकी हुन् ।
कोरोना उपचारमा खटिएका डाक्टरको पञ्चाकै कारण यस्तो हात! देखेपछि कस्को मन नरोला!!